सरकारी धनमा कर्मचारीको रजाइँ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सरकारी धनमा कर्मचारीको रजाइँ
२०७१ जेष्ठ १, बिहीबार ०३:२५ गते
भरतपुर । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा देखावटी अुनगमन गरेर भए पनि बेलाबखतमा चर्चामा आइरहने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा अनियमितता भेटिएको छ । यस कार्यालयमा कार्यालय कामका लागि राखिएका मोटरसाइकल कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत काम र पारिवारिक काममा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
सरकारी सवारी साधनलाई व्यक्तिगत बनाई दुरूपयोग गरेर यहाँका चार जना कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । उनीहरुको यस्तो बदनियतपूर्ण काममा कार्यालय प्रमुख केहरसिं गोदारको सहयोग र समर्थन रहेको पाइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भएको यस्तो भ्रष्टाचारप्रति प्रशासन बेखबर छ ।
कार्यालयकी परिवार नियोजन सुपरभाइजर सीतामाया दाहालले कार्यालयको नाममा रहेको स्कुटरलाई सेतो नं. प्लेटमा नलेखी रातो नं. प्लेटमा लेखेर राख्नुभएको छ । ना २८ प २४७२ नं. को स्कुटर उहाँले कहिल्यै पनि कार्यालयमा नल्याउने कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीका अनुसार दाहालसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि छैन ।
कार्यालयको काममा प्रयोग नहुने यस स्कुटर नयाँ मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्दै गरेका उनका छोराले कलेज जान आउन प्रयोग गर्छन् । इन्धन भने नियमित रूपमै कार्यालबाट व्यहोर्ने गरिएको समाचार स्रोतले जनाएकोे छ ।
त्यस्तै, कार्यालयका लेखापाल लक्ष्मीकान्त शर्मा सेतो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने कार्यालयको मोटरसाइकलमा निजी हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी रातो नम्बर प्लेटमा ना १६ प ९१७ नं. राखी डेरामा राख्ने गर्नुहुन्छ । सो मोटरसाइकलमा लाग्ने इन्धन खर्च कार्यालयले बेहोर्छ तर शर्माले लगेको सो मोटरसाइकल बीरेन्द्र क्याम्पसमा बिएससी पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छोराले क्याम्पस जान आउन र निजी काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
दाहाल र शर्मामात्र जिल्ला जनस्वास्थ्यको बजेटमा रजाइँ गर्ने कर्मचारी होइनन् । सरकारी ढुकुटी दुरूपयोग गर्नेमा कार्यालयका खोप सुपरभाइजर गंगाधर पण्डित पनि अगाडि देखिन्छन् । पण्डितले कार्यालयको युनिकर्न मोटरसाइकल विगत १ वर्षदेखि बिना नम्बर प्लेट चलाइरहेका छन् । उहाँले पनि यस मोटरसाइकल कहिल्यै कार्यालय ल्याउनुहुन्न । घरायसी काममा सरकारी मोटरसाइकल प्रयोेग हुने गरेको छ । इन्धन खर्च भने कार्यालयले दिँदै आएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयका अर्का कर्मचारी जो ज्यालादारी कामदारका रुपमा छन्, उनले पनि साधनको दुरूपयोग गरेका छन् । कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर फिरोज मियाँले कार्यालयको बा १ ब १४४९ नम्बरको यामाहा मोटरसाइकल आफ्नो डेरामा राख्नुभएको छ । दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने साधन दिएर जनस्वास्थ्यले सरकारी नियम र प्रावधानको खिल्ली उडाएको छ । यस मोटरसाइकल पनि कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
मियाँले आफ्नो दस दिनको ज्याला दिने र अन्य आर्थिक चलखेल पनि आपसी समझदारीमा गर्ने गरी कार्यालय प्रमुख केहरसिं गोदारले साधन दिएको बुझिन आएको छ । सरकारी सवारीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर निजी काममा प्रयोग गर्ने तर इन्धन भने सरकारकै हाल्ने कर्मचारीको रवैया कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन । कार्यालयको मोटरसाइकल व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कर्मचारीको हकमा प्रशासनको कारबाही के र कहिलेसम्म रहने हो हेर्न भने बाँकी छ ।